Kupamba nhau haisiri nzira yakaipa - Kunze kwekunge isingafadzi
NeChishanu, Nyamavhuvhu 15, 2014 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Mushure mekuvhunduka kwekutanga uye kusuwa panhau dzekuti mukurumbira akange atora nhamo hupenyu hwake svondo rino, ndakatanga kufunga nezve zvingazonyorwa online. Ini ndakatovandudza nzira dzangu dzekudyidzana kuti kutya kwangu kungave kuti mabhureki aizoedza kuruka nhau mune chimwe chinyorwa nechinangwa chekutyaira traffic yakawanda (nemari) kune yavo brand. Ini ndaitarisira kuti hazvaizoitika… asi maminetsi mashoma gare gare
24 Inbound Kushambadzira Pro Matipi eEcommerce Yemukati Yekushambadzira
China, July 3, 2014 Douglas Karr
Ivo vanhu veReferralCandy vazviita zvakare neichi chikuru chirevo chekupinda mukati mekutengesa kuraira kwe e-commerce zvemukati kushambadzira mune infographic. Ini ndinoda fomati iyi yavakaisa pamwechete ... irondedzero inotonhorera uye fomati iyo inobvumidza zviri nyore vatengesi kuongorora uye kutora dzimwe nzira dzakakura pamwe nezano kubva kune vamwe veakanakisa maindasitiri nyanzvi kunze uko. Heano makumi maviri nemaviri Matipi eEcommerce Yemukati Yekutengesa kubva Inbound Kushambadzira